Ungakuchaza kanjani ukulalela ku encomekayo yakho Umculo Apple Watch nokuthi ukwazi ukulalela? Zonke izinto kubhekwe, ukuthi uncika phezu imodeli wakho wokubuka. Lapha uzothola yonke imisebenzi ehlukene ungenza usebenzisa Apple lwakho lokubuka ngaphandle abhanqiwe iPhone.
Noma yimuphi Apple Buka egijima watchOS 4.1 noma ngaphezulu kuzokwenza ukuba ulalele amaqoqo nohlu lwadlalwayo senziwa yakho iPhone . Ungakwazi futhi uvula izinhlelo zokusebenza efana Spotify futhi iHeartRadio , Njengoba kunje Apple Umculo (uma ungumuntu umsekeli).
an Apple Buka Series 3 noma Apple Buka Series 4 egijima watchOS 4.1 noma ngaphezulu ukwenza konke lokhu okushiwo ngenhla, kodwa it can futhi uxhumano Apple Radio kanye nanoma yimuphi umculo uke ifaniswe up ngokusebenzisa iCloud.
Nakuba amamodeli ngaphezulu ayoliswe nje ukudlala umculo by piggybacking ngokusebenzisa iPhone yakho, Series 3 futhi 4 sakaza umculo ngokufanele emafini. Kunjani sithatha a gander ngesikhathi izindlela ezihlukahlukene ukuze Lalela Umculo Apple Ukubuka .
1 Sebenzisa Apple Buka yomculo Ngaphandle iPhone
2.1 Okuningi kusuka kusayithi lami
Sebenzisa Apple Buka yomculo Ngaphandle iPhone
Segue iwashi lakho. Cindezela Digital Umqhele ukuze ebuyile esikrinini Ekhaya. Thepha isicelo Umculo. Kusukela ngaleso sikhathi, ungakwazi flip ngokusebenzisa izithonjana amaqoqo wakho ezahlukene nohlu lwadlalwayo. Ngokwesinye isandla, shaya indima Library futhi empompini yesigaba Uhlu lwadlalwayo, Abaculi, Ama-aAlbhamu, noma Izingoma.
Ubungeke ke ukwazi Swayipha ngokusebenzisa assortments kushintshwe nge iwashi lakho. Thepha iqoqo, lwadlalwayo, ingcweti, noma imizwilili ufisa ukuba zwa. Ungalawula umculo wakho kusukela kuwashi lakho ngokuthepha ku-Google Play / Inkinobho yokumisa isikhashana, oshaya kwithrekhi elandelayo, noma igxuma kwithrekhi edlule. Ungakwazi futhi ukulawula ivolumu ngokuvula Digital Umqhele.
Funda lesi sihloko okuhlanganisa ulwazi oluphelele mayelana Indlela Yokusebenzisa Apple Buka yomculo Ngaphandle iPhone. Lapha uzothola yonke imisebenzi ehlukene ungenza usebenzisa yakho i-apula Buka ngaphandle kokubhanqaniswa ne-iPhone .
Wena ukhululekile ukubuza imibuzo yakho ezihlobene kulesi sihloko usebenzisa ngezansi Ukukhuluma amazwana ebhokisini. Futhi uvakashele iwebhusayithi yethu downloadfacetime.com ukuze uthole olunye ulwazi ewusizo njalo.
Landa i-VidMix ku-PC For Window 7, 8 & 10
8I-GadgetPack Ye-PC Windows 10/8/8.1/7 - Thwebula Khulula Inguqulo Yamuva
Isibonisi se-WiFi – Miracast Ukuze PC (lwe-Windows 7,8,10 & Mac) U-downloader mahhala
I-SmartNews Ye-PC [lwe-Windows 10, 8, 7 ne-Mac]
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Umakiwe Nge: Listen Music on Your Apple Watch without iPhone